Baafatii xiqqaan kun, kamshaalee warra wardiiwwan keessa jiran tarreessu.Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.
Kabalii Dhangeessaa ajajawwan bu'uuraa warra dhangeessaa hujeekaan fayyadamuudhaaf gargaran of keessaa qabu.
Ajajaawwan akka salphaatti fayyadamtu keessa seenuuf, kabala Meeshaalee fayyadami.
Formulaawwan galchuuf kabala kana fayyadami.
Kabalii Fakkaattii kan mul'atu yoo fakkaattii wardii keessatti saagdu ykn filtu.
Kabala Amala Wantaa Fakkasaa
Kabalii Amaloota Wantaa Fakkasaa wantawwan warra ati wardi keessaa filateef, ajajawwan dhangeessanii fi hiriirsan of keessaa qabu.
Kabalii Haalojii odeeffanno waa'ee wardii ammaa agarsiisa.
xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Saagi kamshaa, saxxaatofi addayaa arfii man'ee ammeeti ida'uudha.